Ikhabhathi yeParadise Point ephambi kwechibi enedokhi yabucala.
Strang, Oklahoma, United States
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStacy
Ikhabhinethi yethu eParadise Point inoluhlu lwezinto eziluncedo ezibandakanya indawo yokuthambeka kwesikhitshane, indawo yomlilo engaphandle, kunye ne440 sq. ft. idokhi enebhodi yokuntywila, ileli yokuqubha kunye nezihlalo zosapho. Ifakwe kwipropathi engasese ene-2,000 ft. yonxweme kunye nemibono emangalisayo yokuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga elijongene neLake Hudson, elinye lamachibi aphezulu e-bass e-Oklahoma. Amathuba omsebenzi abandakanya ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukuqhotsa ii-s'mores, ukuqubha kunye ne-kayaking. Ngaphantsi kwe-cabin ine-grill, ibha, indawo yokuhlala kunye nomlilo wegesi.
Sihlala kwipropathi, kodwa uya kuba nekhabhathi epheleleyo kuwe. Ikhabhinethi iphakanyiswe 8ft ukusuka emhlabeni. Indawo engaphantsi ikhonkrithi kwaye yenza indawo enkulu yokuhlangana, imvula okanye imvula. Gcoba kwi-grill pellet, uhlale ngasemgodini womlilo wegesi, okanye utye kwaye usele kwi-bar. Umgangatho ophambili wekhabhathi usekwe nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela elinezihlalo ezisi-8, igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawari eyi-5ft kunye nendawo enkulu yokugcina, igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala eyaneleyo kunye ne-intshi engama-50 ye-smart tv kunye negumbi lokulala elinendawo yokuphumla. Ibhedi enkulu yenkosi. Igumbi lokuphumla elikhulu linebhedi enkulu yokumkanikazi kunye neebhedi ezingamawele ezi-3.
Iindwendwe zikwanamawaka eenyawo zonxweme lokuloba okanye zihambe nje kwaye zonwabele umbono.
Kukwakho nedokhi yesikhephe ukuqubha okanye ukuloba kulo. Inebhodi yokuntywila kunye neleli yokuqubha. Ukuba uzise isikhephe sakho, sebenzisa irempu yesikhitshane esithambileyo ukuya kwiindawo ozithandayo zokuloba, ukuya kwityhubhu okanye ukhwele nje isikhephe. Sikwanaso nesikhephe esibheqayo kunye neekayak ezininzi zokurenta kanye apha kwipropathi.
Ipropathi izimele kakhulu. Kukho iBar & Grill isiqingatha semayile ngamanzi okanye imayile enye ngemoto. Ukutya okulungileyo kwaye banekaraoke ngeempelaveki. I-Rocklahoma ikwimizuzu eli-10 kude. Amatye eDisney "ukunyuka intaba" kunye nekhaya leBig Meat Run kukuhamba imizuzu eli-10.
Umbuki zindwendwe ngu- Stacy
Sihlala kwipropathi kwaye sisekhaya ixesha elininzi kwaye sinokunxibelelana kakhulu okanye kancinci njengoko uthanda. Sifumaneka ngetekisi nanini na.